Izindaba - Izikibha njengamanje yizinto zemfashini ezithandwayo
Izikibha njengamanje ziyizinto ezithandwayo zemfashini. Ziyinto evamile, elula futhi eshibhile. Zifunwa ngumphakathi. Ngakho-ke mangaki ama-T-shirts asemakethe, futhi lapho abangane bebuthana bedla, amabala aconsela ezingutsheni. Ungazihlanza kanjani?
1. Guqula isikibha ngaphambi kokuwasha, ukuze amaphethini amahle angalimali ngesikhathi sokuwashwa.
2. Geza ngesandla, ngobumnene, ungasebenzisi amandla,
3. Ungasomi isikibha ngqo, usiphendulele ngaphakathi ukuze some. Lokhu kungavimbela izingubo ukuthi zingangcolisi, futhi izingubo zizoba phuzi futhi ziqine
4. Isikibha esinombala omnyama singamanziswa emanzini anosawoti ihora elingu-1 ~ 2 lapho liwashwa okokuqala, okungavimbela izingubo ukuthi zingabi nombala
5. Setha ukwakheka kwesikibha lapho usomisa, ngakho-ke awudingi ukusishisa.
6. Musa ukugeza izikibha nezinye izingubo ezimnyama, ukuze zingabuni izingubo, umbala ogqamile,
7. Musa ukushisa okuphezulu, futhi izinga lokushisa lamanzi lesikibha sikakotini akumele leqe ama-degree angama-30, ukuze kungasheshiswa ukuguga nokuwa kokuphrintwa. Izeluleko zokuwasha amahembe ezemidlalo ezokungcebeleka 1. Ama-alkali amahle nokumelana nokushisa.
Ugeza kanjani izikibha ezinwebekayo?
Izikibha ezinwebekayo akumele zifakwe i-ayina emazingeni okushisa aphezulu ukuvimbela ukonakala kokuqina kwendwangu; musa ukukhukhuleka, okuzolimaza ukuqina kwendwangu; ezinye izikibha ezinwebekayo zilukiwe ngentambo eyisipina, intambo iyathambile, nengaphezulu lendwangu liphaphile. Qaphela ukuthi ungadluli ngokweqile lapho uwasha Kuyasinda ukuvimbela ukushushuluza ngokweqile; Izikibha ezinwebekayo azikwazi ukuvezwa yilanga ukuvimbela ukonakala kokuqina kwendwangu.
Ngokuvamile, lapho ugeza izikibha, zama ukungaziwashi ngomshini, ngoba lokhu kuzothinta ukuqina nokuphrinta kwendwangu. Ngaphezu kwalokho, kungcono ukuzomisa ohlangothini oluhlehlayo ukuvikela amaphethini aphrintiwe ekuhlukeni umbala.